भारतीय राजदूतनिवासमा सुष्माले गरिन् दाहाल र देउवाको यस्तो तारीफ ! – Chetananews.com
भारतीय राजदूतनिवासमा सुष्माले गरिन् दाहाल र देउवाको यस्तो तारीफ !
२८ श्रावण २०७४, शनिबार ०२:०२ 451 पटक हेरिएको
काठमाडौं, साउन २८ – भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले नेपाल अविश्वासबाट विश्वासतर्फ अघि बढेको बताएकी छिन् ।
देउवाले नेपालमा समावेशी लोकतन्त्र संस्थागत भइरहेको र समाजका सबै सीमान्तकृत समूहलाई साथमा लिएर लोकतन्त्र थप मजबुत पार्ने पनि बताएका थिए । देउवाभन्दा अघि बोलेकी स्वराजले नेपाल विश्वासको बाटोमा अघि बढेको भन्दै देउवा र प्रचण्डको प्रशंसा गरेकी थिइन् ।आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।